कालो अंगुर खानुमा यतिधेरै फाइदा विभिन्न लाभदायक गुणहरु जानी राखौँ !; – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / कालो अंगुर खानुमा यतिधेरै फाइदा विभिन्न लाभदायक गुणहरु जानी राखौँ !;
कालो अंगुर खानुमा यतिधेरै फाइदा विभिन्न लाभदायक गुणहरु जानी राखौँ !;
admin3weeks ago स्वास्थ्य Leaveacomment 12 Views
कालो अंगुर खानुमा यतिधेरै फाइदा विभिन्न लाभदायक गुणहरु जानी राखौँ !; गर्मी मौसममा शरीरलाई स्वस्थ र चुस्त बानाईराख्नको लागि बिभिन्न किसिमका फलफूलको जरुरत पर्दछ । जसमध्ये कालो अंगुरको सेवन गर्दा यसमा हुने भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन जस्ता तत्वहरु शरीरका लागि लाभदायी हुन्छ ।
त्यसैले कालो अंगुर खानु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । कालो अंगुरको नियमित सेवनले रुघाखोकी बाट छुटकारा पाउनुका साथै त्वचा लागि फाइदाजनक हुन्छ । कालो अंगुरमा हुने फ्लेवेनाइड्स तथा एसपिरिनले हृदयघातबाट बचाउनुका साथै शरीरमा रगत जम्नबाट रोक्छ ।
यसको सेवनले कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरको तौल घटाउनमा मद्दत गर्छ । यसको सेवनले यूरिकएसिड नियन्त्रण गर्नुका साथै मृर्गौला सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कालो अंगरको नियमित सेवन गर्नाले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
कालो अंगुरमा ग्लुकोज पर्याप्त हुन्छ । यसले शरिरमा स्फूर्ति जगाउने, पाचन संयन्त्र, बलियो बनाउने, आँखा, कपाल र छालाको सौन्दर्यमा पनि सहयोग गर्दछ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
Previous भोलि साउने संक्रान्तिको दिन कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
Next भोलि देखि फेरि?